Eyona 74 imidlalo yebhodi kwimbali | Ndinike ixesha lokuphumla
Eyona midlalo yebhodi ibalaseleyo
UIsake | 20/12/2021 15:57 | ngokubanzi
Ngokuqinisekileyo uyathanda ukwabelana ngamava nosapho lwakho, neqabane lakho okanye abahlobo bakho. Kwaye yintoni inkuthazo engcono kwiintlanganiso, ngezo ntsuku zinemvula okanye ezibandayo, okanye amatheko, kunokuba abe imidlalo yebhodi engcono kakhulu. Zikhona kuzo zonke iincasa kunye neminyaka, yazo zonke iindidi zeendidi ezahlukeneyo kunye nemixholo. Kuyadika? Ayinakwenzeka! Uya kuba nexesha elimnandi ngezi zihloko sizicebisa apha.
Ukongeza, sikushiya nokudityaniswa kwemidlalo yebhodi ebesiyipapasha ukuze ukhethe eyona ifanele le nto uyikhangelayo:
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yosapho
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantwana
Umdlalo webhodi ogqwesileyo wokudlala indima
Eyona midlalo yebhodi yokuphunyuka yegumbi
1 Iintlobo zemidlalo yebhodi
1.1 Umdlali ongatshatanga
1.1.1 Solitaire ngamakhadi
1.1.3 Hayi ngaphandle kwekati yam
1.1.5 IArkham Noir: Ababulali behlelo lobugqwirha
1.2.2 Isiqithi esinqatshelwe
1.2.4 UArhamham wayethusa
1.2.6 Indlu enkulu yempambano
1.2.8 Zombicide kunye neZombie Kidz Evolution
1.2.9 Ipaki yeMysterium
1.2.10 Iintsomi zikaAndor
1.3 Imidlalo yebhodi yabantu abadala
1.4 Kubantu ababini okanye izibini
1.4.1 Uyilo lweTetris ezimbini
1.4.3 Bang! Iduel
1.4.4 Ikhowudi eyimfihlo yeDuo
1.4.6 Iimpawu ezi-7 zeDuel
1.5 Imidlalo yeBhodi yabantwana
1.6 Imidlalo yebhodi yosapho
1.7 Imidlalo yamakhadi
1.7.1 Umsebenzi weMonopoly
1.7.2 Umdlalo wenundu olukhohlisayo
1.7.3 Ukungangeni manzi kabini
1.8.1 I-Cross Dices
1.8.3 Iityhubhu zebali
1.8.4 Umdlalo we-Strick
1.9.1 Ukukrala kweMattel
1.9.5 Indlela yobuncwane
1.9.6 Ukukhangela i-empire cobra
1.9.7 Ibhodi engenanto
1.10.3 Umdlalo weCheckers
1.10.4 I-Parcheesi kunye noMdlalo weGoose
1.10.5 XXL yeBhingo
1.10.7 Iimidlalo eziqokelelweyo
1.11.1 Indawo yeDragon Ball
1.11.2 Intshabalalo yoMdlalo weBhodi
1.11.3 Umdlalo webhodi yezihlalo zobukhosi
1.11.5 I-Walking Dead Trivia
1.11.6 Inqaba yaseIndiana Jones
1.11.8 Ipati & Co. Disney
1.11.10 Ihlabathi leJurassic
1.11.11 Imali Heist
1.11.12 Ubukhazikhazi obumangalisayo
1.11.13 Ithiyori ye-Big Bang yeCluedo
1.11.14 Lowo usondeleyo
1.11.15 UHarry Potter omncinci
1.11.16 Triviant Nkosi yezangqa
1.11.17 I-Star Wars Legion
1.11.18 I-Dune imperium
1.12 Imidlalo yebhodi yeqhinga
1.12.3 Ukukhanya kweTwilight
1.12.4 Isicwangciso sokuqala
1.12.5 Umngcipheko weClassic
1.12.6 I-Disney Villainous
1.12.8 I-Great War Centennial Edition
1.12.9 Imemori 44
1.12.10 Imhotep: Umakhi waseYiputa
1.12.11 Iidolophu zakudala
1.13 Kwi-intanethi kwaye simahla
1.13.1 Free imidlalo websites
1.13.2 Usetyenziso lwezixhobo eziphathwayo
2.1 Imidlalo yebhodi Escape Room
2.2 Indima yokudlala-imidlalo
3 Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ogqwesileyo
Iintlobo zemidlalo yebhodi
Ezi ziindidi ezinemidlalo yebhodi engcono kakhulu kwimbali, yahlulwe ngokweendidi kunye nemixholo. Kubo akukho sizathu sokungabi namaxesha okonwaba ngobuninzi:
Ezi Wedwa kwaye udikiwe, awunakusoloko unemidlalo embalwa, okanye ayisoloko ifuna ukuyidlala, kungcono ukubamba enye yale midlalo yomdlali omnye:
Idekhi yamakhadi, Ikhadi lokudlala, ...
Idesika ayikuvumeli kuphela ukuba udlale kwiqela, unokwenza kwakhona uwedwa wakho Kweyona ndlela icocekileyo yeWindows, kodwa kwitafile yakho, kunye nedesika oyikhethileyo, isiFrentshi okanye iSpanish. Umdlalo wokuphazamisa kwaye ugcwalise iiyure ezingasebenziyo.
Thenga amakhadi aseSpain Thenga idekhi yesiFrentshi yamakhadi
NgoLwesihlanu udinga kuphela umdlali omnye, kwaye ngumdlalo wekhadi. I-adventure eyedwa apho kuphela ungaphumelela umdlalo. Lo mdlalo ukuntywilisela kwibali elimalunga noRobinson, owaphukelwa yinqanawa kwisiqithi sakho kwaye kufuneka akuncede ulwe nenkitha yeengozi kunye nabaphangi.
Hayi ngaphandle kwekati yam
I-Cocktail Games Cat, ...
Lo omnye umdlalo kwakhona yenzelwe umdlali omnye, nangona banokudlala ukuya ku 4. Kulula, idlalwa ngamakhadi. Injongo kukukhokela i-kitten ukuze ikwazi ukufikelela kwindawo efudumeleyo efudumeleyo ukuba iphume esitratweni. Nangona kunjalo, ukuwela imaze yasezidolophini akuyi kuba lula ...
Thenga Hayi ngaphandle kwekati yam
ULúdilo- Umdlalo wesihange ...
Ngumdlalo wekhadi olula kakhulu, nkqu nabantwana. Bangadlala ukusuka kumdlali om-1 ukuya ku-4. Kwaye kuya kufuneka uqinisekise ukuba isihange esizama ukuqhwesha asiphumi kuyo. Iileta ziya kuba zivale indlela yokuyibamba. Umdlalo uya kuphela xa zonke iindlela zokuphuma zivaliwe.
IArkham Noir: Ababulali behlelo lobugqwirha
Umdlalo ophefumlelwe ngamabali othusayo amangalisayo weHP Lovecraft. Sisihloko esikhethekileyo kubantu abadala apho idlalwa yodwa. Ngokuphathelele kwimbali yayo, kuye kwavela ukuba abafundi abaliqela abavela kwiYunivesithi yaseMiskatonic bafunyenwe beswelekile. Aba bafundi bebephanda ngezihloko ezinxulumene nobugqi kwaye kufuneka ufike kwingcambu yeenyani ngalo mdlalo wamakhadi.
Thenga iArkham Noir
Ukuba ufuna ntoni umoya weqela lokukhuthaza, Ngaphandle kokuphuhlisa izakhono zentsebenziswano, yintoni engcono kunale midlalo yebhodi yentsebenziswano:
Umdlalo wentsebenziswano olungele yonke iminyaka, ukusuka kwi-8 yeminyaka ubudala. Kuyo kuya kufuneka usombulule imfihlakalo, kwaye bonke abadlali baya kuphumelela okanye baphulukane kunye. Injongo kukufumana inyani malunga nokufa komoya ojikeleza kwindlwana enabantu abaninzi. Kungoko kuphela apho umphefumlo wakho unokuphumla ngoxolo.
I-Devir-Isiqithi esingavumelekanga ...
Wonke umntu kufuneka asebenze kunye ukubuyisela izinto ezixabisekileyo kwisiqithi esingaqondakaliyo. Kodwa akusayi kuba lula, njengoko esi siqithi sisika kancinci kancinci. Thatha izihlangu ezi-4 zabahambi abanesibindi kwaye uqokelele ubuncwane obungcwele ngaphambi kokuba iphele ingcwatywe phantsi kwamanzi.
Thenga iSiqithi esiNgavumelekanga
IMercury- Umdlalo we ...
Umdlalo ofanelekileyo wokubambisana wamaqela kwaye ulungele usapho lonke. Bangadlala ukusuka kwi-2 ukuya kwi-12 yabadlali. Iqulethe 176 amakhadi aya kukunceda ufumane ipesenti ephezulu igolide emgodini. Omnye wabadlali ngumonakalisi, kodwa abanye abamazi ukuba ungubani na. Injongo kukufumana igolide phambi kwakhe ukuba aphumelele.
Inqwelomoya yeFantasy-Arkham ...
Isekwe kwibali elifanayo leArkham Noir, kunye nokusetwa okufanayo. Kodwa olu luHlelo lwe-3 olugcwele umxholo omtsha, iimfihlakalo ezintsha, ukuphambana ngakumbi kunye nentshabalalo, kunye nezidalwa ezikhohlakeleyo eziya kuzama ukuvusa ububi obuleleyo. Umdlali uya kuba ngumphandi oya kuzama ukunqanda le ntlekele ejikeleze umhlaba ngoncedo lwabanye abadlali kunye nemikhondo enikiweyo.
Thenga iArkham Horror
HABA 302387 Umdlalo ...
Ngumdlalo wentsebenziswano owenzelwe abancinci, ukusuka kwiminyaka emine, nangona abantu abadala banokuthatha inxaxheba. Injongo yeqela leHaba Hamster kukunceda ukuqokelela zonke izinto eziyimfuneko zokutya ebusika. Yonke into ebhodini enazo zonke iintlobo zeenkcukacha, iimpawu ezikhethekileyo (ivili, inqwelo, i-elevator ehambayo ...), njl.
Indlu enkulu yempambano
Iindlu ezinkulu ze ...
Esinye isihloko sentsebenziswano esikuphosa kwiindledlana ezineembewu kunye nezindlu ezinkulu zaseArkham. Kukho iimfihlo kunye nezilo ezoyikisayo ezifihliweyo. Amanye amageza kunye namahlelo aceba ngaphakathi kwezi zakhiwo ukubiza abo baMandulo. Abadlali kuya kufuneka boyise yonke imiqobo kwaye batyhile imfihlakalo. Ngaba uya kukwazi?
Thenga iNdoda yeMadness
Imidlalo ye-Z-man yaseSpain ...
Isihloko esifanelekileyo samaxesha. Umdlalo webhodi eyonwabisayo apho amalungu eqela elikhethekileyo lokulawula izifo kufuneka ajongane nezibetho ezi-4 ezibulalayo ezisasazeke kwihlabathi liphela. Zama ukufumana zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze udibanise unyango kwaye usindise uluntu. Kuphela ngokudibeneyo ...
Zombicide kunye neZombie Kidz Evolution
I-Scorpion Masque-Zombie ...
I-apocalypse ye-zombie ifikile. Ke ngoko, kuya kufuneka nisebenze njengeqela ukuze nixhobe kwaye nitshabalalise bonke abantu abangafanga. Umdlali ngamnye uthatha indima yomntu osindileyo onikwe izakhono ezizodwa, ngoko ke ngamnye uya kuba nendima yakhe. Le yindlela oya kulwa ngayo neqela elosulelekileyo. Ukongeza, inenguqulo ye-Kidz yabantwana abancinci.
Thenga iZombicide Thenga inguqulo ye-Kidz
ILibellud Mysterium Park ...
IMysterium Park yenye yeyona midlalo ibalaseleyo yebhodi yentsebenziswano apho uzintywilisela kumdlalo oqhelekileyo, kodwa ofihla iimfihlo ezimnyama. Owayesakuba ngumalathisi wayo wanyamalala, kwaye uphando alufikelelanga kwisigqibo. Ukususela ngaloo mini, izinto ezingaqhelekanga aziyekanga ukwenzeka kwaye abanye bayaqiniseka ukuba umoya wabo uzulazula apho ... Injongo yakho kukuphanda kunye nokufumanisa inyaniso kwaye unobusuku obu-6 kuphela ngaphambi kokuba i-fair ihambe edolophini.
Thenga iMysterium Park
I-Devir- Iintsomi ze...
Ophumelele ibhaso, esi sesinye sezona zihloko zentsebenziswano zingcono onokuzithenga. Umdlalo owenziwe ngumzobi odumileyo uMichael Menzel kwaye okuthatha ukuya ebukumkanini baseAndor. Iintshaba zalo mmandla zisingise kwinqaba kaKumkani uBrandor. Abadlali bangena kwizihlangu zamagorha ekuya kufuneka ajongane naye ukukhusela inqaba. Kwaye… lumkela inamba.
Thenga Iintsomi zeAndor
Imidlalo yebhodi yabantu abadala
Kulutsha, kwiipati zabahlobo, ukuchitha i eyona mizuzu emangalisayo nabo ubakhathaleleyo. Yiloo nto olu khetho lwezona zihloko zomdlalo wabantu abadala zingcono.
Bona eyona midlalo yebhodi ingcono yabantu abadala
Kubantu ababini okanye izibini
Xa inani labadlali lincitshiswa libe babini nje kuphela, okunokwenzeka akukhawulelwanga. zikhona imidlalo engaqhelekanga yabadlali ababini. Ezinye zezona zingcono zezi:
Uyilo lweTetris ezimbini
I-Diset-Tetris Dual, ...
Ngumdlalo webhodi ofuna iintshayelelo ezimbalwa. Unebhodi ethe nkqo ene-slot kwindawo ephezulu yokulahla amaqhekeza. Isiqwenga ngasinye sinemilo yomdlalo wevidiyo we-retro odumileyo, kwaye kuya kufuneka ulingane ngeyona ndlela ilungileyo kwithuba ngalinye.
I-Zygomatic Abalone, ...
Ngomnye wemidlalo yebhodi yebhodi ethengiswa kakhulu kwihlabathi. Eyilwe ngo-1987, iye yasinda ukuza kuthi ga ngoku ihlaziywe ngokupheleleyo. Unebhodi ene-hexagonal kunye namabhastile athile. Injongo kukujula ebhodini iimabhile ezi-6 zelinye iqela (kwali-14 alibeke kwindawo yakhe).
Ukuba uthanda intshona, uya kuwuthanda lo mdlalo wamakhadi okuthatha ukuse kude nakwintshona yasendle apho uya kujongana nomchasi wakho kwi-duel. Izaphuli-mthetho ezichasene nabameli bomthetho, mnye kuphela onokuhlala, omnye uya kuluma uthuli ...
Ikhowudi eyimfihlo yeDuo
Devir- Ikhowudi eyimfihlo ...
Ngumdlalo wokusebenzisana kunye nemfihlakalo eyenzelwe usapho lonke, idlala ngababini. Kuya kufuneka ukhawuleze kwaye ulumke, njengoko uya kuba yintlola eya kufuneka isombulule iimfihlakalo ngokutolika imikhondo efihlakeleyo. Ezinye zinokuba ziintlanti ezibomvu, kwaye ukuba awukwazi ukubahlula, iziphumo ziya kuba mbi ...
Thenga ikhowudi eyimfihlo yeDuo
IMIDLALO ye-SD- ibango, Umbala ...
Ukumkani ufile, kodwa akukho bani waziyo ukuba kwenzeke njani. Wavela ejongise phezulu emphandeni wewayini. Akashiyanga ndlalifa yaziwayo. Leyo yimeko apho umdlalo uqala khona, onamanqanaba amabini: elokuqala umdlali ngamnye uya kusebenzisa amakhadi abo ukufumana abalandeli, okwesibini abalandeli baya kulwela ukufumana uninzi. Nabani na ofumana iivoti ezininzi kwiqela labo uya kuphumelela.
Iimpawu ezi-7 zeDuel
I-Asmodee-7 iyamangalisa: ...
Ngokufana nesimbo kwiwonga eliphumelele i-7 Wonders, kodwa yenzelwe abadlali aba-2. Phumelela kwaye ubethe ukhuphiswano lwakho ukwenza impucuko yakho iqhubeke. Umdlali ngamnye ukhokelela kwimpucuko, ukwakha izakhiwo (ikhadi ngalinye limele isakhiwo) kwaye uya kunceda ukomeleza umkhosi, ukufumanisa inkqubela phambili yezobugcisa, ukuguqula ubukhosi bakho, njl. Unokuphumelela ngomkhosi, ubunzululwazi kunye nobukhulu boluntu.
Thenga i-7 Wonders Duel
Imidlalo yeBhodi yabantwana
Ukuba unayo abancinci ekhaya, esinye sezona zipho zibalaseleyo onokuthi ubanike zona ngomnye wale midlalo. Indlela yokuba bakhule ngokufanelekileyo, bafunde, kwaye bahlale kude nezikrini okomzuzwana ...
Bona eyona midlalo yebhodi ingcono yabantwana
Imidlalo yebhodi yosapho
Ezi ziphakathi kwezona zilungileyo onokuthi uzithenge, kuba wonke umntu unokuthatha inxaxheba, abahlobo, abantwana bakho, abazukulwana, ootatomkhulu nootatomkhulu, abazali ... Yenzelwe ngokukodwa amaqela amakhulu kwaye amnandi kakhulu.
Bona eyona midlalo yosapho ilungileyo
Kubalandeli be imidlalo yamakhadiNazi ezinye ezingabandakanywanga kumacandelo angaphambili, kwaye asekelwe kwiidekhi:
Amakhadi okudlala yedwa ...
Ngumdlalo weMonopoly wakudala, kodwa udlalwa ngamakhadi. Imidlalo ekhawulezayo neyonwabisayo esebenzisa amakhadi esenzo ukuqokelela irente, ukwenza ishishini, ukufumana ipropathi, njl.
Thenga i-Monopoly Deal
Umdlalo wenundu olukhohlisayo
I-Devir-Umdlalo we-Moth ...
Umdlalo wekhadi oquka ukusasazwa kwabadlali kwaye owokuqala uphume kubo uyaphumelela. Ukwenza oku, kufuneka baphose ikhadi kwijika ngalinye elinenani elingaphezulu okanye elisezantsi ngokukhawuleza kunelo liphezu kwetafile. Kwaye okona kulungileyo kuko konke, ukuphumelela, kufuneka uqhathe ...
Thenga i-Tricky Moth
Ukungangeni manzi kabini
Umdlalo wesantya, uqwalaselo kunye ne-reflexes, kunye namakhadi amaninzi angangeni manzi ukuze ukwazi ukudlala equleni ehlotyeni. Ikhadi ngalinye lahlukile, kwaye linomfanekiso omnye kuphela elifana nawo nawuphi na omnye. Jonga iisimboli ezifanayo, yitsho ngokuvakalayo kwaye uthathe okanye ulilahle ikhadi. Ungadlala ukuya kuthi ga kwimidlalo emi-5 eyahlukeneyo.
Ukuba ibhodi okanye imidlalo yekhadi yeyakudala, ikwanjalo nemidlalo yamadayisi. Nazi ezinye ze Imidlalo yeedayisi adume kakhulu:
Unedayisi ezili-14, iglasi e-1, iglasi yeyure enye, kwaye kuphelele apho. Umdlalo osekelwe ekuguquleni ukuphucula ukuqonda kokuphulaphula, ukunyamezela, izakhono zokuqonda. Kufuneka nje uqengqe idayisi kwaye wenze elona nani likhulu lamagama aqhagamshelweyo phakathi kwexesha onalo. Bhala phantsi amanqaku akho kwaye uphumelele abachasi bakho.
Thenga i-Cross Dices
INdebe yeDayisi engama-20 ...
Ikomityi kunye nedayisi yiyo yonke into oyifunayo ukuze ukhuphisane kwaye udlale. Ngumdlalo olula, onokudlalwa nokuba uthanda kangakanani, kodwa onokuwusebenzisa ngokulula ukuqengqa idayisi kwaye ubone ukuba ngubani oqengqa amanani amakhulu, okanye ukuzama ukuthelekisa indibaniselwano enokuthi iphume.
Asmodee-Ibali Cubes ...
Ayingomdlalo wedayisi wesintu, kodwa unedayisi ezili-9 ezinobuso obunokuba ngabalinganiswa, iindawo, izinto, iimvakalelo, njl. Umbono kukuqengqa idayisi, kwaye kuxhomekeke kwinto oze ngayo, xelela ibali ngezo zithako.
Thenga iiCubes zeBali
Umdlalo wosapho lonke okanye abahlobo. Iduwe yomlingo ngokuqengqeleka idayisi kwibala lemidlalo ukufumana imidibaniso yesimboli ehambelanayo ekuza kugalelwa ngayo amakhubalo kunye namakhubalo. Njengoko umdlalo uqhubeka, umdlali uya kuphulukana namadayisi kwaye aphelelwe ngamandla. Nabani na ophulukene nedayisi kuqala ngulowo ulahlekileyo.
I-NSV - 4032 - QWIXX -...
Kulula ukufunda, phuhlisa izakhono zakho zengqondo, kwaye imidlalo iyakhawuleza, kuba akunamsebenzi wokujika, wonke umntu uthatha inxaxheba. Ukuze ufumane amanqaku, kufuneka uphawule amanani amaninzi kangangoko.
Elinye iqela lemidlalo yebhodi eyimfuneko Imidlalo yebhodi. Iibhodi azikho kuphela isiseko somdlalo, kodwa zinokukubonelela ngemeko yomdlalo ontywilayo. Ezinye iibhodi zisicaba, kodwa ezinye zine-dimensional emithathu kwaye zenziwe kakuhle.
Imidlalo yeMattel Scrabble ...
IScrabble yenye yeyona midlalo yakudala neyonwabisayo yokwenza amagama. Kufuneka upela kwaye udibanise oonobumba ukwenza amagama kunye namakhadi asi-7 athathwe ngokungakhethiyo. Unobumba ngamnye unexabiso, ngoko ke amanqaku abalwa ngokusekelwe kuloo maxabiso.
Isicwangciso semidlalo ye-B PBG40020 ...
Lo mdlalo webhodi uya kukwenza ukuba ukhuphe umphefumlo wakho wengcibi, wenze iithayile ezintle zemosaic ngeethayile zayo. Injongo kukufumana eyona mihombiso ibalaseleyo yobukumkani be-Evora. Inokudlalwa ngabadlali aba-2 ukuya kwaba-4, kwaye ifanelekile ukusuka kwi-8 iminyaka.
I-Tactic Touché yabantwana kunye ...
Umdlalo webhodi onobuchule wosapho lonke. Ukutolikwa kwakhona komdlalo wekhadi kunye nedekhi yaseSpain yajika yaba yibhodi. Ngaba unobuganga bokuyenza ijije?
Iithoyi zeCefa- Umdlalo weDracula ...
I-classic esuka kwi-80s eyenza ukubuya. Umdlalo ophefumlelwe ngamahlathi aseTransylvania, kwizithili zenqaba yaseDracula. Imikhosi yobubi kunye nemikhosi emihle ingqubana njengoko ingabokuqala ukungena kwinqaba. Ngubani oza kuyifumana?
I-Cefa Toys- umdlalo webhodi, ...
Abona bacinga kakhulu baya kukhumbula ngokuqinisekileyo lo mdlalo usathengiswayo. Umdlalo oyonwabisayo wosapho lonke onenjongo yokuthenga nokuthengisa izinto ezisecaleni koLwandle lweMeditera ngenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX. Lawula ubutyebi bakho kakuhle ngelixa ungena kule pirate adventure.
Thenga Indlela yobuncwane
Ukukhangela i-empire cobra
Iithoyi zeCefa-Umdlalo weDisney ...
Umdlalo we-adventure wosapho lonke phakathi kobumnandi kunye nomlingo. Enye yezo zihloko ezazisele zidlalwa ngeminyaka yee-80s kwaye abantwana abaninzi belo xesha ngoku baya kukwazi ukufundisa abantwana babo.
Thenga Ukukhangela kwi-Cobra Empire
YENZA owakho uMdlalo we...
Iichips, idayisi, ihourglass, amakhadi, amakhadi, ivili le-roulette, kunye nebhodi… Kodwa zonke azinanto! Uluvo kukuba uqamba owakho umdlalo webhodi. Ngemigaqo oyifunayo, indlela ofuna ngayo, ukudweba kwi-canvas emhlophe, usebenzisa izitikha eziprintiweyo, njl.
Thenga umdlalo wakho
Khange baphoswe imidlalo yebhodi yakudala, abo bebephakathi kwethu kwizizukulwana kwaye abazange baphume kwisimbo. Ezona zingcono zezi:
Iseti yeStonKraft ye...
Ibhodi yokhuni enomlinganiselo we-31 × 31 cm, eqingqwe ngesandla. Umsebenzi wobugcisa onokusebenza njengento yokuhombisa kunye nokudlala eyona midlalo ilungileyo nabani na ofuna. Iziqwenga zinemagnethi ezantsi ukuze zingawi ngokulula ebhodini. Kwaye ibhodi inokusongwa kwaye iguqulwe ibe yibhokisi yokubamba zonke iithayile.
Iidomino zifuna iintshayelelo ezimbalwa. Ngomnye wemidlalo emidala kwimbali. Kwaye apha unomdlalo obalaseleyo, onetyala leprimiyamu kunye neziqwenga ezenziwe ngezandla. Ukongeza, akukho ndlela inye yokudlala, kodwa kukho izitayile ezininzi ...
30 × 30 cm ibhodi yokhuni eqinileyo yebhirch kunye namaqhekeza angama-40 omthi we-30 mm ububanzi. Kwanele ukudlala umdlalo weklasikhi weetshekhi. Umdlalo olula olungele abantu abangaphezu kweminyaka emi-6 ubudala.
I-Parcheesi kunye noMdlalo weGoose
Cayro-Parchis kunye ne-Oca ...
Ibhodi enye, ubuso obubini, imidlalo emibini. Ngeli nqaku uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze udlale umdlalo wakudala weParcheesi, kunye nomdlalo werhanisi ukuba uyawujika. Kubandakanya ibhodi yeplanga ye-26.8 × 26.8 cm, iibhotile ezi-4, idayisi ezi-4, kunye neetokheni eziyi-16.
Thenga iParcheesi / Goose
Falomir- XXL Umdlalo weBhingo ...
Ibhingo ngumdlalo wentsapho yonke, enye yeeklasikhi zamaxesha onke. Ngegubu elizenzekelayo ukuya kukhulula iibhola ezinamanani angaqhelekanga ukuwela ngaphandle kwamakhadi ude ufumane ukwenza umgca okanye ibhingo. Kwaye ukukhuthaza ukhuphiswano, unokurhweba into ...
Imidlalo - Jenga (Hasbro ...
I-Jenga ngumdlalo wamandulo ovela kwiinkulungwane ezidlulileyo, kwilizwekazi laseAfrika. Kulula kakhulu, kwaye wonke umntu unokudlala. Kuya kufuneka ukuba ususe iibhloko zokhuni kwinqaba ngaphandle kokuwa. Ingcamango kukushiya inqaba ngokungalungelelananga kangangoko ukuze xa ilithuba lomchasi, iwa. Nabani na owisa amaqhekeza uya kulahlekelwa.
Falomir-400, 400 Iiseti ...
Ukruqukile ngumdlalo nje omnye? Ngaba uhamba kakhulu kwaye awukwazi ukuthatha yonke imidlalo onayo? Eyona ndlela ilungileyo kukuthenga le 400-piece pooled game pack. Ibandakanya incwadi enemiyalelo yomntu wonke. Phakathi kwaloo makhulu emidlalo kukho ezinye ezifana ne-chess, imidlalo yekhadi, idayisi, i-dominoes, i-checkers, i-Parcheesi, njl.
Thenga Imidlalo eDityanisiweyo
Ukuba ungumlandeli we Uthotho lweTV, imidlalo yevidiyo, okanye iimuvi uninzi lweemuvi eziphumeleleyo, kukho imidlalo enomxholo malunga nabo oya kuba nomdla ngayo:
Indawo yeDragon Ball
Abalandeli be-anime ye-Dragon Ball baya kuthakazelelwa ngulo mdlalo wamakhadi oquka abalinganiswa abavela kuthotho oludumileyo lweDBZ. Phosa nje ikhadi lakho ngexesha lakho kwaye uzame ukubetha elinye iqela, ngokwamandla akhe ngamnye ...
Thenga iDekhi yeDBZ
Intshabalalo yoMdlalo weBhodi
Iimidlalo zeFlight zeFantasy Doom ...
IDoom yenye yezona midlalo zidumileyo kwimbali. Ngoku kwakhona kuza kwibhodi ngalo mdlalo webhodi apho umdlali ngamnye aya kuba ngumkhosi waselwandle oxhobileyo ukuzama ukulwa nezona zilo zinamandla onokucinga.
Umdlalo webhodi yezihlalo zobukhosi
Ukuba uthe wathabatheka luchungechunge oludumileyo lwe-HBO, ke uya kuwuthanda lo mdlalo webhodi onemixholo yebhodi. Umdlali ngamnye ulawula enye yeeNdlu ezinkulu, kwaye kufuneka asebenzise ubuqili kunye namandla abo ukuze alawule ezinye izindlu. Kwaye bonke kunye nabona balinganiswa bemifuziselo yoluhlu.
Thenga uMdlalo weetrone
Hasbro Umdlalo woBomi -...
Isixeko kunye nabalinganiswa abasuka kuthotho lweeanimated ezidumileyo baphila apha, kule bhodi yolonwabo apho uya kuntywila kubomi bala matyheli amnandi.
I-Walking Dead Trivia
A eqhelekileyo kunye eqhelekileyo Trivial Pursuit, kunye neetshizi zayo, iithayile zayo, ibhodi yayo, amakhadi ayo ngemibuzo ... Kodwa umahluko, kwaye oko kukuba iphefumlelwe uthotho edumileyo zombies.
Thenga i-TWD encinci
Inqaba yaseIndiana Jones
Hasbro Inqaba ye ...
Isihloko se-Adventure kunye nesakhono, esisetwe kwiimuvi zase-Indiana Jones, kunye neTempile ye-Akator njengesetingi. Indlela yokukhumbula lo mboniso bhanyabhanya wawuyenye yezona zinto zinkulu ngexesha layo.
Thenga iLa Torre
UNoris - Umdlalo sisiJamani...
Umdlalo womdlalo, ngokunjalo iJumanji. Umboniso bhanyabhanya odumileyo malunga nomdlalo webhodi ngoku nawo uza ngohlobo lweGumbi lokuPhunyuka kusapho lonke. Fumanisa iimfihlakalo kwaye ubaleke kweli hlathi uphila, ukuba unako ...
Ipati & Co. Disney
I-Diset-Ipati kunye ne-Disney ...
Okungakumbi okufanayo, iQela eliqhelekileyo & neNdibaniselwano, enentaphane yovavanyo lokulinganisa, imibuzo kunye neempendulo, umzobo, amaqhina, njl.njl. Kodwa zonke zinomxholo wezona mpawu zidumileyo zeDisney.
Thenga Party Disney
Diset-Masterchef, Umdlalo ...
Inkqubo yokupheka yeTVE nayo inomdlalo. Dlala kunye nosapho lonke le bhodi ibekwe kwi-Masterchef kunye neekhwizi ezisekelwe kwiprogram yokufezekisa injongo.
Imidlalo nje yePaki yeJurassic ...
Ukuba uthanda iJurassic Park saga kwaye ungumntu othanda iidinosaurs, uya kuwuthanda lo mdlalo webhodi usemthethweni ovela kwimovie yeJurassic World. Umdlali ngamnye kufuneka athathe indima, ukugrumba kunye nokufumanisa iifosili, ukusebenza kwilabhoratri nge-dinosaur DNA, ukwakha iikheji zeedinosaurs kunye nokulawula ipaki.
Thenga iJurassic World
Uthotho lweSpanish iLa casa de papel iye yatshayela iNetflix, kwaye izibeke njengenye yezona zibonwa kakhulu kumazwe aliqela kwihlabathi liphela. Ukuba ungomnye wabalandeli bakhe, lo mdlalo webhodi awunakuphoswa kwirepertoire yakho. Ibhodi eneethayile apho unokudlala khona njengosapho kunye namasela kunye nabathinjwa.
Space Cowboys Okunye ...
Ummandla weMarvel kunye ne-Avenger bafikile kwimidlalo yebhodi. Kulo mdlalo kuya kufuneka uqokelele iqela lamagorha amakhulu kwaye uzame ukunqanda i-Thanos ekubhubhiseni iplanethi. Ukwenza oku, iiGem ze-Infinity ezisasazeke kwi-multi-universe kufuneka zifumaneke.
Ithiyori ye-Big Bang yeCluedo
Ishumi elinanye Force uCluedo...
IseyiCluedo yakudala, enentshukumo efanayo kunye nendlela yokudlala. Kodwa ngomxholo wothotho oludumileyo lweTheory Big Bang.
Thenga iTheory yeBig Bang
Lowo ujikelezayo. Abha...
Uthotho lukamabonakude waseSpain uLa que se avecina ngoku unomdlalo osemthethweni. Dlala kwisakhiwo esidumileyo saseMontepinar kunye nabalinganiswa bayo. Ifanelekile ukusuka kwiminyaka eyi-8, kwaye ingadlala ukuya kuthi ga kwi-12 yabantu. Emdlalweni izinto zicetywa kuluntu, kwaye umdlali ngamnye uthatha isigqibo sokuvota okanye hayi.
UHarry Potter omncinci
Ukusukelana kancinci-uHarry ...
I-Harry Potter saga iye yaphefumlela iimuvi, uthotho, imidlalo yevidiyo, kunye nemidlalo yebhodi. Ukuba uthanda iincwadi zakhe, ngoku unokuba namawaka emibuzo malunga nabalinganiswa bakhe kunye nebali lemilingo elidumileyo lenkulungwane yama-XNUMX kule Trivia.
Thenga Trivial HP
Triviant Nkosi yezangqa
ISHUMI ELINANYE UMTHETHO Ongenamsebenzi Ogcweleyo ...
IHobbit kunye neNkosi yeRings zezinye zezona ncwadi ziphumeleleyo eziye zasiwa kwi-cinema. Ngoku baye baphefumlela ii-vieogames kwaye, ewe, imidlalo yebhodi efana nale Trivial. Umdlalo we-trivia wakudala ngoku unxibe kulo mxholo wexesha eliphakathi.
Thenga i-Trivia Lord of the Rings
I-Star Wars Legion
Imidlalo yeNqwelo-moya yeFantasy-...
Amandla kunye necala elimnyama ngoku liza etafileni yakho ngalo mdlalo usekwe kwisaga yentsomi edumileyo yesayensi. Umdlalo wabadlali aba-2, ukusuka kwi-14 leminyaka ubudala, kwaye apho unokufumana amadabi aziwayo phakathi kweJedi kunye neSith. Khokela imikhosi yakho ngale mikrolo incinci inabalinganiswa basentsomini.
Thenga i-Star Wars Legion
Ukusuka ezincwadini baya kumdlalo wevidiyo kunye nefilimu. I-Dune isandula kubuyela kwithiyetha ngohlelo olutsha. Ewe, unokudlala lo mdlalo webhodi yesicwangciso esihle. Ngamacala amakhulu ajongene namanye, kunye nentlango edumileyo kunye neplanethi eyinkqantosi, nayo yonke into oyilindeleyo kwiDune.
Imidlalo yebhodi yeqhinga
bonke abo banomphefumlo weqhinga kwaye bathanda imidlalo yemfazwe, Thatha iflegi (CTF), kunye nokunye, baya kuyonwabela njengabantwana ngale midlalo yeqhinga ilandelayo:
I-ERA ikusa eSpain yamandulo, umdlalo weqhinga onamancinci ali-130, idayisi ezingama-36, iibhodi zemidlalo ezi-4, izikhonkwane ezingama-25, abamakishi aba-5, kunye nebhlog enye yamanqaku. Indlela yokuhlaziya imbali yaseSpain ngesi sihloko esikhulu.
Ngumdlalo weqhinga lokugqwesa, enye yezona zithengiswa kakhulu kwaye zanikezelwa, kunye nabadlali abazizigidi ezi-2 kwihlabathi liphela. Isekelwe kwisiqithi saseCatan, apho abahlali bafikile khona ukudala iilali zokuqala. Umdlali ngamnye uya kuba neyakhe, kwaye kuya kufuneka aphuhlise ezi dolophu ukuze aziguqule zibe zizixeko. Ngenxa yoko udinga izixhobo, seka izivumelwano zoshishino, kwaye uzikhusele.
Lo ngomnye wemidlalo yebhodi yobuchule. Isekelwe kwixesha le-post-Twilight Wars, i-Great Races ye-Empire yamandulo yaseLazax yaya kwiindawo zabo zokuhlala, kwaye ngoku kukho ixesha lokuzola okubuthathaka. Umnyele wonke uya kushukuma kwakhona kumlo wokubuyisela itrone. Lowo ufezekisa umkhosi womkhosi okrelekrele ngakumbi kunye nolawulo uya kuba nethamsanqa.
Thenga i-Twilight Imperium
I-classic yemfazwe kunye nemidlalo yeqhinga. Ibhodi oza kuhlasela kuyo kwaye uzikhusele ngobuqhetseba, ukubamba iflegi yotshaba ngomkhosi wakho wamaqhekeza angama-40 anemigangatho eyahlukeneyo.
Umdlalo weHasbro- Umngcipheko ...
Lo mdlalo uphakathi kwezona zidumileyo zolu hlobo. Ngayo kufuneka uyile isicwangciso sokulawula ihlabathi. Ngamanani angama-300 ahlaziyiweyo, imisebenzi enamakhadi, kunye noyilo olunenkathalo kakhulu. Abadlali kufuneka benze umkhosi, bahambise imikhosi kwimephu kwaye balwe. Ngokuxhomekeke kwiziphumo zedayisi, umdlali uya kuphumelela okanye alahlekelwe.
Kuthekani ukuba bonke abangendawo beDisney badibana kumdlalo ukuze baqulunqe isicwangciso seMachiavellian? Khetha umlinganiswa owuthandayo kwaye ufumane izakhono ezizodwa anazo. Yenza esona sicwangciso sibalaseleyo kwithuba ngalinye kwaye uzame ukuphumelela.
Imidlalo yokuJonga 22160028 -...
Ukusuka e-Uwe Rosenberg, le pakethe ibandakanya iibhodi zemidlalo ezi-9 ezinamacala amabini, amatye angama-138, izitampu zesondlo ezingama-36, amatye ezilwanyana angama-54, amatye abantu abangama-25, iingcingo ezingama-75, izitali ezingama-20, iithokheni ezingama-24, izindlu zelizwe ezingama-33, iithayile ezi-3 zeendwendwe, ukuphindaphinda oku-9. iithayile, ibhloko yamanqaku e-1, ilitye lokuqalisa lomdlali om-1, amakhadi angama-360, kunye nencwadana yemigaqo. Ayisweli iinkcukacha zokukwazi ukwakha nokulawula ifama yakho yamandulo apho unokuphuhlisa ezolimo kunye nemfuyo ukulwa nendlala ...
I-Great War Centennial Edition
Imidlalo emnandi kakhulu ...
Ngokuqinisekileyo umxholo othi The Great War, okanye The Great War, kaRichar Borg uvakala uqhelekile kuwe. Ngumyili ofanayo noMemoir 44 kunye ne-Battlelore. Isekwe kwiimfazwe zeMfazwe yeHlabathi yokuQala, ivumela abadlali ukuba bathathe icala kwaye baphinde badlale amadabi embali athe aqhubeka emingxunyeni nakwithafa ledabi. Umdlalo obhetyebhetye kakhulu onamakhadi eentshukumo kunye namadayisi asombulula ukulwa.
Iintsuku zoMmangaliso 7301 ...
Ngombhali omnye, le yenye yeyona midlalo ilungileyo yeqhinga lemfazwe onokuthi uyithenge. Seta eli xesha kwiMfazwe yesibini yeHlabathi, kunye nokwandiswa okunokwenzeka kunye neemeko ezahlukeneyo zokwandisa umxholo. Ukuba uthanda isicwangciso somkhosi kunye nembali, iya kuhambelana nawe njengeglavu. Nangona inzima kancinci...
Imhotep: Umakhi waseYiputa
Ukubuyela emva ngexesha ukuya eYiputa yaMandulo. U-Imhotep wayengumakhi wokuqala kunye nodumileyo ngelo xesha. Ngoku ngalo mdlalo webhodi ungazama ukuthelekisa impumelelo yabo ngokuphakamisa amatye ezikhumbuzo kunye nokuzoba ezakho izicwangciso zokuthintela abachasi ukuba baphumelele.
I-Asmodee - Iinqaba ...
Lwela ukuba nguMakhi oMkhulu olandelayo wobukumkani. Chukumisa ubuhandiba ngezakhono zakho zophuhliso lwesixeko kwaye uncede abalinganiswa abohlukeneyo ngalo mdlalo weqhinga. Unamakhadi abalinganiswa abasi-8 kwipakethi ongakhetha kuyo, amakhadi esithili angama-68, amakhadi oncedo asi-7, uphawu lwesithsaba esi-1, kunye neempawu zengqekembe zegolide ezingama-30.
Kwi-intanethi kwaye simahla
Kwakhona unayo inkitha imidlalo yebhodi online, ukuze dlala simahla yedwa okanye nabanye abakude, kwakunye apps zezixhobo eziphathwayo apho ukonwaba ngaphandle kokuba umntu (nangona oku ngokuqinisekileyo kususa ezinye charm yayo, kwaye ngexabiso ukukhanya ... phantse ngcono ukuba yiba nomdlalo womzimba):
Free imidlalo websites
Idabi lomkhosi wamanzi
Usetyenziso lwezixhobo eziphathwayo
Unokukhangela evenkileni Google Play kwisixhobo sakho esiphathwayo okanye kwi I-Apple App Store, kuxhomekeke kwindlela yokusebenza onayo, ezi zihloko zilandelayo:
ICatan Classic ye-iOS kunye ne-Android.
Carcassone for Android
Imonopoly ye-iOS kunye ne-Android
Scrabble ye-iOS kunye ne-Android
Imifanekiso ye-iOS kunye ne-Android
Chess ye-iOS kunye ne-Android
Umdlalo weGoose we-iOS kunye ne-Android
Kukwakho iindidi ezimbini zemidlalo yebhodi, nangona zingabandakanywa kwelinye lamacandelo angaphambili, zenze udidi oluzimeleyo ngokwazo. Ukongeza, ezi ziphumelele a impumelelo ngenkohlakalo, kwaye banabalandeli abaninzi ngakumbi nangakumbi bezi zimbo:
Imidlalo yebhodi Escape Room
Amagumbi okusinda sele efashini kwaye ahlasele wonke ummandla waseSpain. Sele enye yezona zinto zithandwa kakhulu kumazwe amaninzi, kuba ikuvumela ukuba usebenzisane nabahlobo okanye usapho kunye nokusombulula iipuzzle. Ukongeza, banazo zonke iintlobo zemixholo, ukwanelisa zonke izinto ezinqwenelekayo (intsomi yesayensi, uloyiko, imbali, ...). Iiseti ezimangalisayo ngenxa ye-Covid-19 zinezithintelo ezinzulu. Ukuze ujikeleze ezo zithintelo, kufuneka ujonge eyona izihloko Escape Room ukudlala ekhaya.
Bona eyona midlalo ilungileyo yebhodi Escape Room
Enye yeziganeko ezininzi ezifumana abalandeli ukudlala indima. Bakhobokisa kakhulu, kwaye kukwakho neentlobo ngeentlobo zazo, ezinemixholo emininzi. Le midlalo ikuntywilisela kwindima, umlingiswa oya kufuneka udlale ngexesha lomdlalo ukufezekisa iinjongo.
Bona eyona midlalo yebhodi yokudlala indima engcono
Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ogqwesileyo
Ngexesha le khetha imidlalo yebhodi efanelekileyo ezinye izitshixo kufuneka zithathelwe ingqalelo. Olu qwalaselo luya kukunceda ngalo lonke ixesha ukuthenga okulungileyo:
Inani labadlali: kubalulekile ukuqwalasela inani labadlali abaza kuthatha inxaxheba. Kukho abantu aba-2 kuphela, abanye abantu abaninzi, kunye namaqela okanye amaqela. Ukuba ngaba izibini okanye ezimbini, ayifanelekanga kangako, kuba phantse zonke zinokudlalwa ngabantu ababini kuphela. Kwelinye icala, ukuba zezembutho zabahlobo okanye kwimidlalo yebhodi yentsapho, oku kubaluleka.
Ubudala: kubalulekile ukuqinisekisa iminyaka ekucetyiswa ngayo umdlalo. Mininzi imidlalo eyeyawo wonke umntu ukusuka kubantwana ukuya kubantu abadala, ngoko ke ikulungele ukuyidlala njengosapho. Endaweni yoko, ezinye ngomxholo zijoliswe kwabancinci okanye abantu abadala.
Gxi ninisa: Eminye imidlalo yeyokuphucula imemori, eminye yokuphucula ingqiqo, izakhono zentlalo, ukukhuthaza umsebenzi wentsebenziswano, okanye izakhono zemoto, kunye nemfundo. Ngaphandle kwabo ngabantwana, oku kubalulekile, ekubeni eyona nto ifanelekileyo kufuneka ikhethwe ngokweemfuno zomntwana.
Isihloko okanye udidi: Njengoko ubonile, kukho iindidi ezininzi zemidlalo yebhodi. Akuyena wonke umntu othanda wonke umntu, ngoko kubalulekile ukwazi indlela yokuchonga uhlobo lokudlala lwecandelo ngalinye ukuze uphumelele ngokuthenga.
Ukuntsokotha kunye nejika lokufunda: kubaluleke kakhulu ukuba abancinci okanye abadala baya kudlala, ukuba ubunzima bomdlalo abukho phezulu, kwaye une-curve yokufunda elula. Ngale ndlela baya kukwazi ukuqonda amandla omdlalo ngokukhawuleza kwaye abayi kulahleka okanye badideke ngenxa yokungazi ukuba badlale njani.
Indawo yokudlala-Imidlalo emininzi yebhodi ikuvumela ukuba udlale kuyo nayiphi na itafile eqhelekileyo okanye umgangatho. Kwelinye icala, abanye badinga indawo encinci kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi lomdlalo. Ke ngoko, kuyafuneka ukuba uhlalutye imida yekhaya kakuhle kwaye ubone ukuba umdlalo okhethiweyo unokuqhelana kakuhle nokusingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Eyona midlalo yebhodi ibalaseleyo
Eyona midlalo yebhodi yokudlala indima